गैर युएस यूट्यूब क्रिएटरका लागि कर सुझावहरू - सबपल्स
सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरू परिवर्तन गरिरहन्छन् र यूट्यूब पनि अब ती मध्ये एक हो। लगातार अपडेटहरू आवश्यक छ त्यसैले प्लेटफर्म प्रचलनबाट बाहिर जान वा बेवास्ता हुन नदिन। समुदायलाई अझ मित्रवत बनाउने युट्यूबले यूट्यूब च्यानल भएका व्यक्तिहरूमा कर लगाउन सुरु गरेको छ। यो पहिले नै अमेरिकामा आधारित साझेदारी कार्यक्रमको एक हिस्सा थियो तर अब यो पूरै विश्वमा विस्तार भयो।
गैर यूएस युट्यूब निर्माताहरूले चाँडै करहरू तिर्ने छन वा तिनीहरूको राजस्व प्लेटफर्मले समात्न सक्दछ। यस्तो कर लगाउने यो पहिलो पटक हो। सामान्यतया, यदि तपाइँ गुगल Adsense खातामा तपाइँको कर जानकारी पेश गरेको छैन। यदि तपाइँ तपाइँको जानकारी फाइल गर्नुहुन्न भने तपाइँको आयमा २v% कर लगाइनेछ।
यहाँ छ कि तपाईं यसमा कसरी सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको गुगल एड्सेन्स खातामा लग इन गर्नुहोस्
नेभिगेसन मेनूमा भुक्तानी विकल्पमा जानुहोस्
सेटिंग्स प्रबन्ध मा क्लिक गर्नुहोस्
त्यहाँ एक अमेरिकी कर जानकारी खण्ड हुनेछ जहाँ तपाईं आफ्नो कर जानकारी प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ
त्यो ट्याबमा फारम भर्नुहोस् र यसले तपाईंलाई कुन अनलाइन फारम भर्न आवश्यक पर्दछ। फारम बहु भाषाहरूमा उपलब्ध छ र खातावालाले सजिलैसँग पहुँच गर्न सक्दछ।
करको रकम व्यक्तिबाट फरक फरक हुन्छ र मुख्यतया तीन चीजमा निर्भर हुन्छ
तपाई हुनुभएको देशको संयुक्त राज्य अमेरिकासँग कर सम्झौता छ
चाहे तपाइँ तपाइँको सबै कर जानकारी पेश गर्नु भएको छ
तपाइँको श्रोताको कति अमेरिकामा अवस्थित छ
कर दर तपाइँको देशले राज्यहरूसँग हस्ताक्षर गरेको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, कोरिया र मेक्सिको जस्ता देशहरूले १०% कर तिर्नु पर्छ भने युकेले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ०% तिर्नु पर्छ। यस्तो सन्धि भएको मुलुकमा बसोबास गर्दा तपाइँले कर लाभका लागि योग्य बनाउँदैन। तर यदि तपाइँ तपाइँको सबै जानकारी पेश गर्नुहुन्छ भने।
तपाइँ तपाइँको Adsense खातामा प्रासंगिक जानकारी फाइल गर्न se१ मे २०२१ सम्म छ। यसले गुगललाई तपाईंको आयमा करको सही रकम पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं त्यसो गर्न असफल हुनुभयो भने गुगलले तपाईंलाई युट्यूबबाट 31% आय कमाउनेछ।
के मैले अरू करहरू तिर्नु पर्छ?
हो, यो करहरूको रकम हो जुन तपाईंले अमेरिकालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ तपाईं अझै आफ्नै देशहरूमा करहरू दाखिल गर्न योग्य हुनुहुन्छ। एक आय कर वकील संग सम्पर्क राख्नुहोस् वा तपाइँको देश मा कर को बारे मा अनलाइन अध्ययन। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ दुबै अमेरिका र आफ्नै देशको लागि करहरू फाइल गर्नुहोस्।
तपाईंको आफ्नै देशहरू द्वारा कठोर सजायबाट बच्नको लागि तपाईंले योग्य पेशेवरहरूको कानुनी सल्लाह लिनुपर्दछ। यो पनि उत्तम छ कि तपाईले कुनै पनि चिन्तामा कारबाही लिनुहोस् ताकि ती मिति भन्दा अघि नै समाधान हुन सक्छ।
यदि तपाईले जानकारी पेश गर्नुभएन भने के हुन्छ?
विश्वव्यापी आयमा पूर्वनिर्धारित दर २%% हो, यसको मतलब यो छ कि तपाईले आफ्नो आयको २%% लाई Google लाई आत्मसमर्पण गर्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्नै जानकारी भरिनुभयो भने यो तपाईंको जीवनमा निर्भर रहिरहेको छ यती धेरै कम हुन सक्छ।
यदि जानकारी प्रदान गरिएको छैन भने गुगलले तपाईं एक अमेरिकी नागरिक हुनुहुन्छ मान्नेछ र तपाईंको सबै आयमा कर लगाउनेछ। यो पनि यूएस मात्र श्रोताको सट्टामा तपाईंको विश्वव्यापी दृश्यता समावेश गर्दछ।
अमेरिकामा युट्यूब सृष्टिकर्ताको बारेमा के हुन्छ?
गुगलका अनुसार संयुक्त राज्यका धेरै जसो सिर्जनाकर्ताहरूले यसअघि नै सम्बद्ध जानकारी सबमिट गरिसकेका छन्। तिनीहरूले यो गर्नु पर्ने थियो जब तिनीहरू युट्यूबको साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी भए। यी सिर्जनाकर्ताहरूमा कुनै थप करहरू लगाइने छैन। यूट्यूब करहरू अत्यावश्यक परिवर्तन हुन् जसले यी नयाँ-आयु क्यारियरहरूलाई एक नियामक निकाय अन्तर्गत ल्याउँछ। धेरै देशहरूले एक सामाजिक मिडिया क्यारियर कार्यको एक स्ट्यान्डआउट लाइनको रूपमा स्वीकार गर्दैन धेरै जसो कर कानूनहरू अस्पष्ट छन्।
यो सामाजिक मिडिया ताराहरू प्रति व्यक्तिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तनहरू गर्ने गुगलको प्रयास हो। यूट्यूबले उनीहरूको प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने व्यक्तिको संख्यामा ठूलो वृद्धि देखिएको छ र यसलाई व्यावहारिक क्यारियर पथ बनाउनको लागि चाहन्छ।
सोशल मिडियामा प्रभावकारीहरू बढ्दै जाने र भ्लगि v गर्ने लोकप्रिय व्यवसायहरूमा नयाँ हुनेछ। कानूनी दृष्टिकोणबाट पनि एक व्यक्तिले यी व्यवसायहरूको बारेमा सोच्न आवश्यक छ। धेरै वर्षदेखि, अस्पष्टता त्यहाँ रहेको छ कि सामाजिक मिडियामा कसैले उनीहरूको करहरू कसरी तिर्ने छ। एक अमेरिकी उद्यम भएर Google ले मामिलालाई आफ्नै हातमा लिएको छ र करहरू लगाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्ता करहरूले कानुनी रूपरेखा अन्तर्गत यी नयाँ-युग प्रोफेशनहरू पाउनेछन् र लामो समयको लागि सबैको लागि सजिलो बनाउँदछ।
बहु-च्यानल नेटवर्कको बारेमा के हुन्छ?
MCNs पनि छुट छैन। YouTube सिर्जनाकर्ताहरूले यी MCNs बाट सिधै भुक्तानी प्राप्त गरिरहेको छ वा छैन अझै तिनीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता सिर्जनाकर्ताहरूले Google सँग प्रासंगिक जानकारीमा फाईल पनि गर्नुपर्नेछ वा उनीहरूको २ 24% आय गुमाउनुपर्नेछ।
यूट्यूबले धेरै देश-विशेष भिडियोहरू जारी गरेको छ जसले तपाईंलाई तपाईंको ट्याक्स जानकारी कसरी फाइल गर्न सक्छ भनेर बताउँछ। यो पछ्याउन सजिलो छ र तपाईंलाई कसरी तपाईंको सबै कर सम्बन्धित जानकारी फाइल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बताउँछ। यूट्यूब एनालिटिक्स एक सजिलो तरीका प्रदान गर्न को लागी तपाइँको कमाई अमेरिकी प्रयोगकर्ता बाट मात्र हो। भविष्यमा यो काम आउँदछ जब तपाईंले वास्तवमै कर तिर्नु पर्छ।
कसरी एक अमेरिकी आय गणना गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईको अमेरिकी आय हेर्न यो एकदम सजिलो छ। यहाँ केहि साधारण चरणहरू छन् जुन तपाईं तिनीहरूलाई अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ:
तपाईंको Youtube विश्लेषण पृष्ठमा जानुहोस्
उन्नत मोड छनौट गर्नुहोस्
मितिहरूको लागि दायरा चयन गर्नुहोस्
त्यसो भए तपाईले जियोग्राफीमा क्लिक गर्नुपर्नेछ
एक ड्रप-डाउन मेनू देखा पर्नेछ
यस मेनूमा 'तपाईंको अनुमानित राजस्व' विकल्प छनौट गर्नुहोस्
संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी हेर्नुहोस्
र voilà तपाईंसँग आवश्यक सबै जानकारीहरू हुनेछन्।
धेरै व्यक्तिहरूले यस पहिले नै डबल कर प्रणालीको असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। निर्माता अब संयुक्त राज्य अमेरिका नहुन्जेल दुई देशलाई तिर्न बाध्य छ यसले एल्गोरिथ्म लगातार परिवर्तन गरिरहने भए पनि रचनाकारहरुलाई राम्रो प्रदर्शन गर्न अतिरिक्त बोझ दिन्छ।
गुगलले उनीहरूको राजस्वको एक हिस्सा लिने भएकाले धेरै व्यक्तिहरूले यो नयाँ कर प्रणालीमा आपत्ति जनाएका छन्। त्यसमाथि, महामारीले सबैको लागि गाह्रो बनाएको छ। हेर्ने समयहरू तल छन् र विज्ञापन राजस्व कहिल्यै कम भएको छैन।
यस नीतिलाई यस समयमा रिलीज गर्नु रचनाकारहरूको लागि अनुकूल नहुन सक्छ जुन एक-मानिस टोलीको रूपमा सञ्चालन गर्दछ। तर पछाडि टोलीहरू र सहायकहरूको साथ च्यानलहरूको लागि, यो कर रोलआउटले उनीहरूको जागिरमा वैधता थप गर्दछ। यसले प्लेटफर्ममा राजस्व पनि प्राप्त गर्नेछ र आउँदो वर्षहरूमा यसको दीर्घायु सुनिश्चित गर्नेछ।
एक महत्वाकांक्षी Youtuber को रूप मा यदि तपाइँ बढ्न चाहानुहुन्छ हामी तपाईको जानकारी चाँडै नै सुरू गर्ने बित्तिकै सिफारिस गर्दछौं। यस तरीकाले तपाईं अघि प्रमाणित हुनेछ र तपाईंको YouTube आयको २%% आत्मसमर्पण गर्नुपर्दैन। युट्यूब कर भविष्यमा कडा बन्ने छ र यस्तो परिवर्तन जारी राख्न तपाईको निर्भरता छ।
डबल ट्याक्सन राज्यका बाहिर बस्ने मानिसहरूलाई राम्रो लाग्न सक्छ तर लामो समय मा यो सबै को लागी राम्रो हो। यी कानूनहरूको पालना गर्दा तपाईंको सिर्जनाकर्ताको रूपमा राम्रो युट्युब अनुभवलाई सुनिश्चित गर्दछ। यी कानूनहरु तपाइँको सुरक्षा र समुदाय को एक हिस्सा हुन को लागी छन्। यूट्यूब समुदाय बढ्दै जाँदा थप कानूनहरू पेश गर्नुपर्नेछ कि जसले गर्दा भिडियो साझेदारी प्लेटफर्म जोखिम मुक्त रहन सक्दछ र सबैका लागि सजीलो पहुँच योग्य छ।
यो Youtube Hq को लागी पनि संक्रमणको चरण हो, र तिनीहरू यसको लागि तत्पर छन्। गुगल एड्सेन्सले धेरै परिवार र व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई मनपर्ने क्षेत्रहरूमा क्यारियर बनाउन सक्षम गर्दछ। यात्रा र फेसन प्रभावकर्ताहरूले हालका वर्षहरूमा सबैभन्दा ठूलो बूम देखेका छन् र यो प्रवृत्ति २०२१ मा पनि जारी रहनेछ। यसको पहुँचको कारण YouTube कुनै पनि लम्बाईका भिडियोहरू साझेदारी गर्न इष्टतम प्लेटफर्म हो। चाहे यो लामो र जानकारीपूर्ण होस् वा छोटो र मीठा तपाई सबैका लागि एक दर्शक भेट्टाउनुहुनेछ।
तपाईंको जानकारीमा पहिले नै फाइल गर्नुहोस् र तपाईंको आयमा उच्च करबाट जोगिनुहोस्। तपाइँ विशेष गरी नयाँ कानूनहरु मा सावधान हुनुपर्छ किनकि तिनीहरूले गम्भीरताका साथ लिईएन भने धेरै समस्या निम्त्याउन सक्छ। यूट्यूब करहरू सबै यूट्यूब सिर्जनाकर्ताहरूमाथि लगाइनेछ र त्यसले यूट्यूबलाई नवोदित सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको लागि आत्म-निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाउनेछ।
निश्चित गर्नुहोस् कि सामग्री ताजा छ र यूट्यूब दिशानिर्देशहरूको साथ सि sy्कमा छ। युट्यूबले यसको प्लेटफर्मलाई सुरक्षित र बाल मैत्री बनाउन सचेत प्रयास गरिरहेको छ। तिनीहरू पारिवारिक मैत्री मंच बनाउन प्रतिबद्ध छन् जुन सबैले कुनै समस्या बिना नै मज्जा लिन सक्छ। तपाईंलाई एक इमर्सिभ अनुभव दिदै यूट्यूबमा अब सामग्री कम गर्ने सामग्री छ जुन प्रकृतिमा संवेदनशील हुन सक्छ वा हुन सक्दैन। तपाईंले मन नपराउने जस्तो चीज फेला पार्ने सम्भावनाहरू कम छन् किनभने एल्गोरिथ्मले तपाईंको पहिले हेरिएको भिडियोहरूसँग मिल्दो सामग्री पुश गर्दछ।
याद गर्नुहोस् तपाईंको जानकारीमा गुगल एडसेन्स खातामा st१ मे २०२१ को अगाडि फाईल गर्नुहोस् र कम कर अनुभवको आनन्द लिनुहोस्।
गैर युएस यूट्यूब सिर्जनाकर्ताहरूको लागि कर सुझावहरू सबपल्स लेखकहरू द्वारा, 30 अप्रिल 2021
शीर्ष भिडियो सम्पादन प्रविधिको महारत बजार योग्य YouTube भिडियो बनाउन
YouTube मा सर्वश्रेष्ठ सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू तिनीहरूको अडियो र भिडियो रेकर्ड गर्न महान् गियरमा भर पर्दैनन्। तिनीहरू विभिन्न भिडियो सम्पादन प्रविधिहरूमा निर्भर छन् जुन उनीहरूको भिडियोहरू बनाउन मद्दत गर्दछ ...
YouTube-360०-डिग्री भिडियो के हो र तपाईं यसबाट कसरी लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ?
जबदेखि यूट्यूब सुरू भयो, मानिसहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसको सेवाहरूको फाइदा लिइरहेका छन्। बजार उत्पादनहरू र सेवाहरूमा भिडियोहरू थप्ने डुब्बा कसैको आरामबाट बाहिर निस्किने मानिन्छ।
ब्रान्डले महामारीको समयमा कसरी YouTube प्रयोग गर्दैछ?
कोरोनाभाइरसको प्रकोप सायद अकल्पनीय रूपमा भयावह अवस्था हो जुन मानवजाति विगत केही महिनाहरूमा आमनेसामने भेट भएको छ। स्टे-एट-होम अर्डरहरूले मानिसहरूलाई सुरक्षाको लागि घरमा बस्दै आएका छन्। व्यवसायहरू ...
सेवा यूट्यूब च्यानल मूल्यांकन ($ १२०)
तपाईंको YouTube च्यानलको गहन रेकर्ड गरिएको भिडियो मूल्या +्कन + तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूलाई विश्लेषण गर्दछ + तपाईंको अर्को चरणहरूको लागि 5-चरण कार्य योजना।
पूर्ण च्यानल मूल्यांकन
तपाईंको च्यानल र भिडियोहरूको लागि विशेष सुझावहरू
तपाईंको भिडियो र सामग्री रणनीति समीक्षा गर्नुहोस्
भिडियो प्रचार गर्न र सब्सक्राइब गर्ने रहस्य
तपाईका प्रतिस्पर्धीहरुको विश्लेषण गर्नुहोस्
तपाईंको लागि विस्तृत--चरण कार्य योजना
वितरण समय: to० देखि days० दिनहरू
सेवा १ यूट्यूब भिडियो एसईओ ($ )०) YouTube यूट्यूब भिडियो एसईओ ($ )०) YouTube यूट्यूब भिडियो एसईओ ($ )०) YouTube यूट्यूब भिडियो एसईओ ($ )०)
तपाइँको युट्यूब भिडियो को एक पूर्ण मूल्यांकन, हामीलाई तपाइँलाई एक वर्धित शीर्षक + वर्णन + १० कुञ्जी शव्दहरू / ह्याशटैगहरू दिन अनुमति दिँदै।
पूर्ण भिडियो एसईओ मूल्यांकन
१ वर्धित शीर्षक प्रदान गरियो
१ विस्तारित विवरण प्रदान गरियो
Rese खोजशब्दहरू / ह्यासट्यागहरू
सेवा १ च्यानल ब्यानर डिजाइन ($ )०) १ भिडियो थम्बनेल डिजाइन ($ २)) १ भिडियो थम्बनेल डिजाइन ($ २)) १ भिडियो थम्बनेल डिजाइन ($ २))
एक पेशेवर, पूर्ण रूपले पुनः डिजाइन गरिएको YouTube च्यानल ब्यानर र YouTube भिडियो थम्बनेलहरू।
व्यावसायिक डिजाइन गुणवत्ता
तपाईंको ब्रान्ड मेल गर्न अनुकूलन
कडा र संलग्न डिजाइन
उचित आकार र YouTube को लागि गुणवत्ता
तपाईंको क्लिक थ्रु रेट (CTR) लाई सुधार गर्दछ